विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २० करोड नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? Canada Nepal
भारतमा एकैदिन ३ सय १९ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए, ३२ हजार निको भए
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ३ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ लाख ४६ हजार ३ सय ९९ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३१ हजार ४ सय ५८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ करोड ३५ लाख ९३ हजार ४ सय ९२ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३२ हजार ५ सय ४९ कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । यससँगै हालसम्म ३ करोड २८ लाख ४० हजार ७ सय २४ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार ०८:१८:४० बजे : प्रकाशित
विश्वभर एकैदिन ५ लाख १२ हजार कोरोना संक्रमित थपिए, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ५ लाख १२ हजार ८ सय २२ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २३ करोड १३ लाख ५६ हजार २ सय २८ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ८ हजार ६ सय १९ कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४७ लाख ४१ हजार ६ सय २५ पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ४ लाख ८६ हजार ९ सय ८८ कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । यससँगै हालसम्म विश्वभर २० करोड ८० लाख २७ हजार ९ सय ७५ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ७ लाख २ हजार ९ सय ७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ४ करोड ३५ लाख ३२ हजार ४ सय ९१ पुगेको छ । यस्तै अमेरिकामा ३ करोड ३० लाख ३३ हजार ५ सय २५ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै ब्राजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ५ लाख ९३ हजार १८ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या २ करोड १३ लाख ८ हजार १ सय ७८ पुगेको छ ।
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार ०९:१६:२४ बजे : प्रकाशित
भारतीय मूलकी अमेरिकी उपराष्ट्रपतिलाई भेटेपछि मोदीले भने– तपाईलाई स्वागत गर्न सम्पूर्ण भारतीय आतुर छन्
नयाँ दिल्ली - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससँग भेटवार्ता गरेका छन् । भारतीय मूलकी उपराष्ट्रपति कमलालाई मोदीले ह्वाईटहाउसमा भेट गरेका हुन् । कमला अमेरिकाको उच्च ओहोदामा पुग्ने पहिलो भारतीय मूलकी व्यक्ति हुन् ।
उपराष्ट्रपति कमला क्यालिफोर्नियाको ओक्लान्डमा जन्मिएकी हुन् । उनकी आमा भारतमा जन्मिएकी थिइन् भने बाबु जमैकामा जन्मेका थिए । हावर्ड विश्वविद्यालमा अध्ययन गरेकी कमला डेमोक्रयाटिक पार्टीबाट अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने पहिलो अश्वेत महिला हुन् ।
गत नोभेम्वरमा कमला उपराष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि उनको पुख्यौली गाउँ ठूलासेन्द्रापुराममा खुसियाली मनाइँएको थियो ।तीनदिने अमेरिका भ्रमणका क्रममा मोदी बुधबार न्युयोर्क पुगेका थिए । उनले आजै साँझ अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेनलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । एजेन्सी
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार ०९:४१:४१ बजे : प्रकाशित